Liverpool Oo Raadinaysa Neymar-ka Cusub Ee Kasoo Baxay Brazil & Jurgen Klopp Oo Qorshaynaya Inuu Ku Garaaco Naadiyada Kula Tartamaya - Gool24.Net
Liverpool Oo Raadinaysa Neymar-ka Cusub Ee Kasoo Baxay Brazil & Jurgen Klopp Oo Qorshaynaya Inuu Ku Garaaco Naadiyada Kula Tartamaya
Liverpool ayaa bartilmaameed ka dhigatay da’yarka reer Brazil Talles Magno oo lagu tilmaamo inuu leeyahay astaamihii Neymar Jr, dadkuna ugu yeedhaan Neymar-ka cusub.
Magno oo ay da’diisu tahay 17 jir ayaa xilli horeba isku muujiyey horyaalka heerka koowaad ee Brazil oo uu kooxda Vasco da Gama si joogto ah ugu safto oo uu da’yarteeda kasoo baxay, waxaana Liverpool ay shiishka saaratay si ay u hesho ciyaartooyo aanay lacag badan kaga bixin oo ay mustaqbalka ku dagaal-gasho maadaama dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhac ku keenay fayrasku.
Tababare Jurgen Klopp ayaa waxa uu fursad u heli doonaa haddii uu Talles Magno helo, inuu ka ciyaarsiiyo booska Roberto Firmino, waxaana u dheer inuu leeyahay tayo uu khadka dhexe iyo weerarkaba si cajiib ah oo isku mid ah uga ciyaari karayo.
Reds waxay rumaysan tahay in Vasco da Gama oo ka mid ah kooxaha soo saara da’yarta ugu wanaagsan qaarkood, sannadkii 2018-kiina £17 milyan oo kali ah kusoo fasaxday Paulinho oo ku biiray Bayer Leverkusen in haddana ay ku qasban tahay inay qiimo jaban ku iibiso Talles Magno maadaama ay dhibaato xun oo dhaqaale ku jirto oo deymo badan loo haysto.
Illaa hadda kooxda reer Portugal ee Benfica ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay da’yarkan, waxaanay miiska u saartay kooxda reer Brazil lacag dhan £2.5 milyan, hase yeeshee Liverpool ayaa waxay qorshaynaysaa inay dalab ka hor marsan midkaas hor dhigto Vasco da Gama, ciyaartoygana ay ku qancin karto inuu fagaareyaasha waaweyn yimaaddo oo Anfield uu kula soo biiro Firmino, Fabinho iyo Alisson oo ay isku waddan yihiin.
Liverpool waxa kale oo ay doonaysaa da’yarka reer Belgium ee Aster Vranckx.